Kiisaskii ugu badnaa ee Covid-19 ah oo laga diiwaan galiyey Shiinaha | Radio Himilo
Home / COVID 19 / Kiisaskii ugu badnaa ee Covid-19 ah oo laga diiwaan galiyey Shiinaha
Himilo – 42-kiis ayaa laga diiwaan galiyey gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha, taas oo ka dhigan kuwii ugu badnaa ee hal maalin gudaheed lasoo wariyo dalkaasi muddo ka badan laba bil.
22-ka mid ah kiisaska cusub waxaa laga diiwaan galiyay magaalada Kashgar oo xudun u ah feyruska kusoo laba kacleeyay dalkaasi. Mas’uuliyinta caafimaadka gobolka ayaa sidoo kale sheegay in 19 ruux oo kale oo lagu arkay calaamadaha Covid-19, inkastoo dowladdu u aqoonsan kiisas karona ah.
Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Shiinaha, kororka kiisaska ayaa loo aaneynayaa feyruska oo kusii fidaya gobolka Xinjiang ee waqooyi-galbeed Shiinaha, waxeyna taasi dhalisay in tijaabo caafimaad la mariyo 4.75 milyan oo ruux oo ku nool Kashgar galinkii danbe ee talaadadii
Markii ugu danbeeysay ee kiisas intaa la eg laga soo wariyo Shiinaha waxey ahayd 10-kii August, markaas oo lagasoo sheegay 44-kiis oo Covid-19 ah. Guud ahaan Shiinaha 85,868 oo ruux ayaa qaaday coronavirus, halka ay u geeriyoodeen 4,634 qof.
Previous: Manchester United oo dalab ka gudbisay Hakan Calhanoglu
Next: La Kulan: 13-jirka cunnada iyo dharka ugu deeqa dadka hooy la’aanta ah